राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा साढे चार करोडभन्दा बढी बजेट – Sulsule
सुलसुले २०७८ वैशाख ३ गते १४:०१ मा प्रकाशित
ताप्लेजुङमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ४८ सरकारी विद्यालयमा रु. चार करोड ५६ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७–७८ का लागि ताप्लेजुङका ती विद्यालय छनोटमा परेका हुन् ।
आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका–११ सामुदायिक विद्यालयमा रु. दुई करोड एक लाख विनियोजन भएको छ । फुगुवा आरभूत विद्यालय, छातेढुङ्गा आधारभूत र जालपा देवी आधारभूत विद्यालयका लागि शिक्षामा नवीन प्रविधि प्रवर्द्धन गर्नका लागि रु. १९ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ । सरस्वती माध्यमिक र नमूना आधारभूत विद्यालयमा सिकाइ सामग्री खरीद गर्नका लागि रु. १३ लाख तथा त्रिपुरेश्वर शान्ति आधारभूत र परमसिंहदेवी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षाकोठ निर्माण गर्नका लागि रु. ५४ लाख विनियोजन भएको छ । दुर्गा र गुप्तेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा शौचालय तथा खाने पानीका लागि रु. १४ लाख विनियोजन भएको उल्लेख छ ।
फुङ्लिङ नगरपालिकामा भानु जनमाध्यमिक र जनता माध्यमिक विद्यालयममा खानेपानीसहित शौचालय निर्माणका लागि सात लाखका दरले रु. १४ लाख विनियोजन भएको मन्त्रलयले जनाएको छ । राससका अनुसार वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर खरीदका लागि छ लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । मयेम माध्यमिक विद्यालय र मेवाराज आधारभूत विद्यालयमा शिक्षामा नवीन प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि रु. १४ लाख विनियोजन भएको छ । बाल सुबोधिनी संकृत माध्यमिक विद्यालयमा कक्षाकोठा निर्माण गर्न रु. १८ लाख विनियोजन भएको छ ।
मेरिङदेन गाउँपालिकामा दुई वटा विद्यालय छनोटमा परेको छ । सिंहकाली आधारभूत विद्यालयमा शिक्षामा नवीन प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्नका लागि छ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ । पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षाकोठा निर्माणका लागि रु. १८ लाख विनियोजन भएको छ ।
मैवाखोला गाउँपालिकामा चार विद्यालय छनोटमा परेका छन् । मैवाखोला माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षामा नवीन प्रविधि प्रवर्द्धन गर्नका लागि रु. छ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ । सरसुवती आधारभूत विद्यालयमा कम्प्युटर खरीदका लागि रु. छ लाख ५० हजार, ठोट्ने आधारभूत विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकासका लागि रु. ५० लाख र पाटी डाँडा माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशालाका लागि रु. छ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ ।
पाथीभरायाङवरक गाउँपालिकामा छ विद्यालय छनोटमा परेका छन् । जसमा रु. ४६ लाख विनियोजन भएको छ । कालिका माध्यमिक, शारदा माध्यमिक, हिमालय आधारभूत र कुम्भकर्ण आधारभूत विद्यालयमा कम्प्युटर खरीदका लागि रु. ३२ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ । थेचम्बु माध्यमिक विद्यालयमा सिकाइ सामग्री उपलब्ध तथा अधिवृद्धिका लागि रु. छ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ । पानी धारासहितको शौचालय सिरस्वस्ती आधारभूत विद्यालयमा रु. सात लाख विनियोजन भएको छ ।
शिदिङवा गाउँपालिकामा छ विद्यालय छनोटमा परेका छन । ती विद्यालयका लागि रु. ४५ लाख विनियोजन भएको छ । भञ्ज्याङ माध्यमिक र सिदिङवा आधारभूत विद्यालयमा खाने पानीसहित शौचालय निमार्णका लागि रु. १४ लाख तथा सिंहदेवी आधारभूत विद्यालयमा शिक्षामा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्न रु. छ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ । नीलगिरि माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठा निर्माणका लागि रु. १८ लाख र सिद्देश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री खरीदका लागि रु. छ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ ।
सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा पाँच विद्यालय छनोटमा परेका छन् । ती विद्यालयका रु. ५६ लाख विनियोजन भएको छ । सिनाम माध्यमिक र सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षाकोठा निर्माणका लागि रु. ३६ लाख र कञ्चनजङ्घा माध्यमिक विद्यालयमा सिकाइ सामग्री खरीद गर्नका लागि रु. छ लाख ५० हजार विनियोजन भएको छ । गणेश माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षामा नवीन प्रविधि प्रवर्द्धन गर्नका लागि रु. छ लाख ५० हजार तथा अवेगुदिन माध्यमिक विद्यालय खानेपानी र शौचालयका लागि रु. सात लाख विनियोजन भएको छ ।